ကျွန်မနားလည်သော ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ကျွန်မနားလည်သော ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်
ကျွန်မနားလည်သော ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်
Posted by thu thu . sittwe on Jun 14, 2012 in Opinions & Discussion | 16 comments
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားကို အပြင်ကလူတွေ ဝိုင်းအော်နေကြပါလား … မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးက ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို ခံစားခွင့် မရှိဘူးလား ? … နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ မည်မျှပင် သေးငယ်ပါစေ အင်အားနဲပါစေ ထိုနိုင်ငံသည် အချုပ်အခြာအာဏာတည်မြဲနေသရွေ့ နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် လုံခြုံငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် မည်မျှပင် အင်အားနဲနေပါစေ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်နေပါစေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနှင့်ရော လူသားတစ်ဦးအနေနှင့်ရော ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို ခံစားခွင့် မရှိဘူးလား …
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသော စကားကို မပြောခင် လုံခြုံရေးဆိုတဲ့စကားကို ပြောချင်ပါတယ် … ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဟာ လုံခြုံစိတ်ချရသောအနေအထားတွင် ရှိပါရဲ့လား … သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေး၊ စားဝတ်နေရေး၊ ရေရှည်ဘဝတည်ဆောက်မှု မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ အလုံအခြုံကင်းမဲ့နေတာကို နက်နက်တွေးလေ ကြောက်စရာကောင်းလေပင် … ဒီလုံခြုံရေးကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူမှာလဲ? ဘယ်လိုတည်ဆောက်ပေးမှာလဲ?
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသည် လူသားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်ကူညီတတ်သူများပါ .. ဒါ့ကြောင့်သာ နိုင်ငံမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဒီအထိ ရှင်သန်ကြီးထွားနေကြတာ မဟုတ်ပါလား … ရခိုင်တွေနဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေဟာ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီ အကျိုးစီးပွားရှာခဲ့ကြတာလည်းရှိပါတယ် … ရခိုင်လူမျိုးတွေက သူတို့တွေကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ ရပ်တည်နိုင်အောင် မတည်ပေးခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ စာနာထောက်ထားမှု ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုမှ မငဲ့ကွက်ပဲ ကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့ နယ်မြေဒေသကို ထိပါးစော်ကားလာသည်ကား အခြေခံလူသားစိတ်ဓါတ်မှ ရှိပါသေးရဲ့လားလို့ ကျွန်မတို့က အံ့ဩကြောက်လန့်ရပြီ …
တစ်စုံတစ်ရာသည် အသားစားတတ်သော ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ ရှေ့မှောက်တွင် ရောက်နေသည်ဆိုပါစို့ … အဆိုပါ တစ်စုံတစ်ရာသည် သမင်ငယ်ဆိုပါက ပြေးဖို့စဉ်းစားပါလိမ့်မည် … ဒါပေမယ့် ဒီသမင်ငယ် ပြေးလို့လွတ်မလွတ်ကတော့ သူ့ကံကြမာ အတိုင်းပါပဲ … အဲဒီ တစ်စုံတစ်ရာဟာ ယုန်ငယ်လေးတစ်ကောင်ဆိုရင်တော့ ပြေးမလွတ်တာ သေချာပြီ … ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဆိုရင်တော့ ပြန်တိုက်ခိုက်မှာပဲ … တကယ်လို့ လူသားတစ်ဦးဆိုရင်ကော … သူ့အသက် သူ့တာဝန်အတွက် ဒီကျားကို ကိုယ်စွမ်းရှိသလောက် အသက်မရရအောင်လုပြီး ပြန်တိုက်ခိုက်မှာပဲ … သူ့ရဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လူသားတစ်ဦးဦးသာ ရှိနေပါက အဲဒီလူသား ဘာလုပ်မလဲ???? ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ် တစ်စုံတစ်ရာဟာ လူသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျားရှေ့မှာသာရောက်နေခဲ့ရင် ပါတ်ဝန်းကျင်က လူသားက မဖြစ်မနေ ကူညီပါလိမ့်မယ် ….
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျားရှေ့က တစ်စုံတစ်ရာကတော့ “ဟဲလို ကျားကြီးရယ်” လို့ မလုပ်နိုင်တာ အမှန်ပါ ..
မကောင်းကျောင်းပို့ တဲ့ … ဒီလို ကျေးဇူးမသိ လူသားစိတ်မရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများကို မိမိနိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိပါးစော်ကားနေပါလျက် ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ယူရမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကို အန္တရယ်တောထဲ တွန်းပို့နေသလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်မှုကို အရှည်သဖြင့် ထိန်းသိမ်းဖို့ရာ မလွယ်ကူသည့် အခြေအနေပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေးကို စဉ်းစားဖို့ အခွင့်အရေး ရှိပါအုန်းမလား … သားသမီးမကောင်း မိဖခေါင်း တဲ့ … ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်နဲ့ သူတို့ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ ..
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းသော ရိုဟင်ဂျာများကို လက်ခံပေးပါရန် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ၏ တောင်းဆိုချက်နှင့် အမေရိကန်ရဲ့ ဒုက္ခသည်များကို ပြန်မပို့ရန်တိုက်တွန်းချက်အပေါ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက တုန့်ပြန်မှုအပေါ် အံ့ဩမိပါသည်။ မိဘတောင် လက်ခံမထားလိုသည့် ဒီလူတွေကို မဆီမဆိုင် မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လိုတာဝန်ရှိနေတာပါလိမ့် … ဘင်္ဂါလားနိုင်ငံမှ ဒီလူတွေကို ငြင်းခွင့်ရှိပါသလား ?? မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ရော ဘာကြောင့် ငြင်းခွင့်မရှိတာလဲ?? ဒီရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲက တာဝန်ယူရမှာလား ??… သူတို့တွေက ဒုက္ခသည် စခန်းမှာနေမှာလား ?? ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကိုရော ဘယ်သူတွေက တာဝန်ယူမှာလဲ??
သားသမီးမျက်ရည်ကို မိဘကောင်းတို့သည် ဘယ်သောအခါမှ လစ်လျှူရှုမည်မဟုတ် … အများနားလည်ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကျွန်မတို့ လိုချင်တောင့်တနေသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်နေရာမှာ ကွာခြားမှုရှိနေပါသလဲ?? ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် လုံခြုံငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခွင့်ကို မျှော်လင့်ခွင့် ရှိပါသေးရဲ့လား???? ဒီဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများနှင့် အတူတကွ ရှေ့ဆက်ရမည့်ဘဝခရီးလမ်းအတွက် စဉ်းစားလေ ရင်မောလေပါပဲ ….
About thu thu . sittwe
thu thu has written4post in this Website..
View all posts by thu thu . sittwe →
ဦးနု လက်ထက်က စစ်တွေကအမတ်က သူမဲနိုင်ဖို ့လိုတော့ ဘင်္ဂါလီ(၁)သိန်းသွင်းပြီး
လယ်ယာကျွန် လုပ်ခိုင်းပြီး မဲရအောင်ယူ အနိုင်ယူခဲ့ဖူးတယ်။အဲဒီတုန်းက မြန်မာ့အသံ
မှာ ရိုဟင်ဂျာ အစီအစဉ်ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားကဏ္ဍတောင်လွှင့်ခဲ့ဖူးတယ်။ခုချိန်မှာ
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တရားမဝင်ရောက်နေသူ(၅)သိန်းကျော်ကို ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်း
မလဲဆိုတာ လွှတ်တော်မှာ အသည်းအသန်ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။
အနီပေးတိုင်း ပြီးရောလားဗျာ။ကျနော်ပြောတာ မမှန်ရင် ပြန်ရှင်းပြပေါ့။
ဒါ တတ်သမျှ အကုန်ထင်ပါရဲ ့။
အားလုံးကို အစပြန်ကောက်ရင် (အမှန်တကယ်)ဥပဒေစိုးမိုးရေးပဲ
အဲဒါကို အမြန်ဆုံးနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မှ နယ်စပ်လုံခြုံနိုင်မယ်။
ပြဿနာက ၃ ခုရှိတယ်..။
၁-ပြည်တွင်းနေပြီးသားရိုဟင်ဂျာတွေ နဲ့ တဖက်နိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်း အတွင်း/အပြင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ကူးလူးဆက်သွယ်နေတာ၊ အဲဒါကြောင့် ဆက်ပြီးစိမ့်ဝင်နေတာ..။
၂-ပြည်တွင်းရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားစိတ် မရှိတာ..။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် သူတို့နေတဲ့မြေကြီးကို သူတို့ပဲတနေ့ပိုင်ရမယ်လို့ ထင်နေတာ။ အဲလိုအယူအဆ သွတ်သွင်းခံထားရတာ..။
၃-ပြည်တွင်းနေပြီးသားရိုဟင်ဂျာတွေ လူဦးရေ အဆမတန်ပေါက်ကွဲနေတာ..။
ဒါကြောင့် တံတိုင်း ၃ ခု လိုတယ်။
၁-လုံခြုံရေးတံတိုင်း- အဲဒီမှာ စည်းရိုးခတ်တာ၊ လုံခြုံရေးချကင်း လှည့်ကင်းတွေထားတာ စသည်တို့ပါတယ်။
၂-ဥပဒေ တံတိုင်း- တရားမျှတမှန်ကန်တဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥပဒေလိုအပ်ပြီး အဲဒီဥပဒေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လဲ လိုအပ်တယ်။
၃-လူမျိုးတံတိုင်း- တဖက်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ဧရိယာတွေမှာ ရခိုင်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားတွေအများစု (တကဲ့အများစု- အနည်းဆုံး ၉၅%) အခြေချ နေထိုင်သင့်တယ်။
အဲဒါဆို တနေ့ မြန်မာပြည်ကို နာမည်ပြောင်းရလိမ့်မယ်…။
လုပ်စရာတွေပြီးသွားရင် july မှာ ပိုစ့်တင်ဆွေးနွေးဦးမှာ…။
အပေါ်က ကျုပ်ကွန်မင့်ဟာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားဖိနှိပ်ပြောဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါ..။
ဒီပိုစ့်က ငြိမ်းချမ်းရေး၏အဓိပ္ပါယ် လို့ ဆိုထားလို့..
အာပလာငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီပလိုမေစီငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကြားကောင်းအောင်ပြောပြီးနာမည်ကောင်းယူသောငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်တဲ့-
ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်စစ် ဖေါ်ဆောင်မယ့် လမ်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးတာပါ…။
၂-မြန်မာပြည်ကို သစ္စာစောင့်သိသူ အလွန့်အလွန်နည်း …. တာကလွဲရင်
တကျပ်မလျော့ တကျပ်မပိုတဲ့ လူပါပဲ…။
လူ လူ ချင်းအဖြစ်တော့ လေးစားပါတယ်…။
ဥပမာ သူတို့သာ အမေရိကန်မှာနေမယ်ဆိုရင် ကျုပ်က အရမ်းအရမ်းကို ချစ်ပြလိုက်ဦးမှာ…။
the best comment of oo oo par !
thu thu . sittwe says:
ဦးဦးပါလေရာကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ် ….
ကျားကို ကျားမှန်းသိတဲ့လူတွေဟာ.. ကျားကိုဖမ်းပြီး.. ခို်င်းစားခဲ့ကြတယ်..။
အဲဒီမှာ.. ပွဲလာကြည့်သူတွေ.. “ဟဲလိုကျားကြီးရယ်.”. လုပ်ကြပါတယ်..။
NGO တွေက တကယ်တမ်း လှူတာက နည်းနည်း ရယ် သူတို့ ရဲ့ facility (aircon နဲ့ မှ အိပ်ချင်တာတို့ ကားက ဆောင့် ရင်မစီးချင်တာတို့) ပြည့်အောင် ဖြည့်နေရတာနဲ့ တင် ကုန်နေတာ ရယ် .. ကျုပ်တော့မယုံပေါင် သူကြီးရယ် …။
အဲဒီနေရာမှာ ကျုပ်တို့နိုင်ငံသားတော်တော်များများ ပြည်တွင်းကပုံမှန်လစာထက်ကောင်းတဲ့လစာတွေရကြတယ်…
အသိဉာဏ် ရှိသော လူ သတ္တဝါ နဲ့ ဆန္ဒ သုံးခုသာ သိသော သတ္တဝါ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းငှာ … အကျွန် မဝံ့ ကြောင်းရယ်ပါ။
မှန်ပါတယ်။ NGO တွေဆိုတာ ဒုက္ခသည်တွေကို ပါးစပ်ထဲကနှိုက်စားတာပါ။
မှန်ပါတယ်။ NGO တွေဆိုတာ ဒုက္ခသည်တွေ ပါးစပ်ထဲကနှိုက်စားတာပါ။
သူကြီးဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာကို ဉာဏ်မမှီလို့ မစဉ်းနိုင်ကြောင်းပါ …
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကျားအကောင်တစ်ရာလောက် ပို့ပေးလိုက်ချင်ပါတယ် … သူကြီးအလိုရှိသလောက် ခိုင်းနိုင်ပါကြောင်း …
တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့ သူကြီးရယ်။ တစ်ခုရှိရင် တစ်ဖဲ့စီ စားတာပေါ့။ အဲ.. ဟုတ်ပေါင်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာက. .. ကျားကို ခိုင်းနိုင်တဲ့ ပညာထိ မရှိသေးတာတို့… ကျားလှောင်အိမ် မရှိသေးတာတို့ကလဲ ကျားကိုမမွေးရဲတာရဲအကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။